ISILILO: Eziyodla uMshengu izintuthane ziyobonakala ngamakhanda abovu – Bayede News
by nguDez Khumalo Posted on 14 February 2020 14 February 2020
Isililo siqhuma nhlangothi zonke ngokuhamba kukaDkt uBhekizizwe Joseph Shabalala obengumsunguli nomholi weLadysmith Black Mambazo. Uthathe umhlalaphansi eminyakeni embalwa eyedlule ngenxa yokuxinwa wukugula nokugcine kumhlalise phansi waqhutshwa ngesihlalo. Omunye wabazwakalise isililo sabo esikhulu ngokudlula kukaBaba uJoseph Shabalala wuNks uLinda Bukhosini Oyisikhulu Esiphezulu esikhungweni i-The Playhouse eThekwini. Exoxisana nentatheli yeBAYEDE uNks uBukhosini ulandise iphephandaba ngokuhlangana kwakhe noMshengu eNew York e-USA. “Ngakhulela elokishini ngikhonze ukulalela umsakazo. Nganginothando lokulalela umculo wesicathamiya kanti iqembu engangilikhonzile kwakuyiNqaba yabeSuthu eyaduma ngengoma eyayithi, “Intolibhantshi”, kusho uNks uBukhosini. Uqhubeke wathi ngaleso sikhathi wayeneminyaka eyi-12 efunda eJuliad School of Music eNew York.
“UMshengu wafika neqembu lakhe bezocula khona e-United States of America. Ngabe sengizethula kuye nokuthi nami ngiqhamuka eNingizimu Afrika. Wabe esethi kimi wathi, hawu nenza izinto zabelungu! Wenze isiqiniseko sokuthi uma usubuyela ekhaya lo mculo uwunikeza indawo ewufanele ngoba abantu kufanele bazi ngawo,” kuqhubeka kuchaza uNks uBukhosini nothe wamethembisa uMshengu ukuthi nakanjani uyokwenza okusemandleni ukuthi umculo wesicathamiya awuphendlele indawo esikhungweni iThe Playhouse noma ayazi ukuthi kuzoba bukhuni ngenxa yabantu ababephethe ngaleso sikhathi. “Okwangihlekisa sixoxa noMshengu wukuthi ngathi uma ngimbuza ukuthi uzokwenzani e-USA wangiphendula ngokuthi bazocula kwelinye ihholo naye angalazi igama lalo.
Ngathi uma sengiyiphenya indaba yalelo hholo ayekhuluma ngalo ngathola ukuthi yiCarnegie Hall okuyihholo elikhulu hhayi e-USA nje kodwa emhlabeni jikelele. Lokho kucula laphaya kwakuthatha iBlack Mambazo noMshengu kubabeka eqophelweni eliphezulu kakhulu emhlabeni,” kuchaza uLinda. Ukuphetha indaba ende ibe mfishane uLinda uthi uma esebuyile eNingizimu Afrika kwadingeka enze imizamo yokufezekisa isethembiso ayesenze kuMshengu. Waqala ukuhambela iYMCA okuyindawo okwakubanjelwa kuyo imincintiswano yesicathamiya. “Kwaba nenkinga yokuthi umqhudelwano wesicathamiya wawungeke ulungelane nePlayhouse ngokwendlela oqhutshwa ngayo. Zazizokhulekwaphi izimbuzi ezazibekwe njengemiklomelo ePlayhouse? Kwaluhlobo lwamalambu akhona lwalungalungelene nemiqhudelwano edonsa ubusuku bonke.
Nemali yokuxhasa imiqhudelwano yaba yinkinga kwaze kwasiza inkampani yakwaBP neNBS ukuthi umqhudelwano uqhubeke. Kuso sonke lesi sikhathi uBaba uShabalala wayelokhu eseduze kwami engichazela ngemikhuba eyenzeka uma kuqhudelwana esicathamiyeni. Wenza omkhulu futhi umsebenzi wokuvikela isithunzi sami njengomuntu wesifazane emqhudelwaneni wesicathamiya onabantu besilisa ikakhulukazi,” kubeka uLinda. UNks uBukhosini uthe kuningi abakwenzile beyi-The Playhouse ukuhlonipha iqhaza likaMshengu nelaMambazo endimeni kacothoza. Udalule nokuthi ngoMgqibelo lo wakusasa ntambama kuzobe kuhlonishwa yena uMshengu ngamaqembu nabathandi besicathamiya khona eThe Playhouse. “Sengiphetha angidlulise amazwi enduduzo emndenini naseqenjini ngokudlula kukaMshengu silahlekelwe ngumuntu omkhulu kodwa obezithobe ngendlela eyisimanga”, kuphetha uNks uLinda Bukhosini. Uma ingosi ibuyela emuva kancane, sekukhulunywe kakhulu ngokomnikelo waleli qhawe emculweni. Awuphumeleli amaGrammy kuze kube kahlanu ikhono lakho kokwenzayo lidlule lingatshazwe.
Awuhlonishwa yizikhungo zemfundo ephakeme unikwe isithunzi sokubizwa ngoSolwazi nangoDokotela uma ukwenza kwakho kungekhona okudlulelayo kokwabanye abantu. Awubi umzali okuthi abanye bexakwe yizingane eziqhutshwa ngogovane ngokuziphatha okungenasibonelo kodwa ezakho zize zibe zine ezabafana zithi, “sizolandela izimfundiso zikababa, nabantu basibone impela sihambisa okwakhe.” Lo Dkt uJoseph Shabalala olele namuhla ugudlane amahlombe nabaculi abahlonishwayo emhlabeni. Lapha sibala oMichael Jackson, oPaul Simon, oHugh Masekela, oRay Phiri, oThandiswa Mazwai nabanye abaningi. Amaphimbo eqembu lakhe Amambaz’ Amnyama alolongeke ngendlela yokuthi ayinyama ngisho kubadidiyeli bamafilimu. Iyezwakala iMambazo icula phambili ingenisa ingqayi ka-Eddie Murphy nokumanje kuthwetshulwa ingxenye yayo yesibili iComing to America! Ku-The Lion King ikhona, ku-Invictus, iCry The Beloved Country namanye. Miningi idida ingqondo imisebenzi kaDkt uShabalala, ukulanda ngayo sikushiyela abanye. Usehambile uMshengu kodwa ngabe isizwe sifundeni kuye okuyosisiza ngomuso? Lapha kubhekiswe kwaboHlanga ngenxa yokuthi uMshengu impilo yakhe uyiphile ngaphansi kwesihluku sobandlululo.